Raw Mesterolone (Proviron) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Uyewo, inozivikanwa seMesterolone (Proviron) poda ndiyo inogenous androgen steroid inotorwa nemuromo. Yakatanga kuonekwa kuti ishandiswe mune zvehutano mu1934 sekuita-kukurudzira uye kupikisa-kuderedza dambudziko remishonga. Asi vashandi vezvipfeko nevarume vane pasi yakanyanya testosterone vakaona kuti inobatsira zvikuru mubazi rezvepabonde. Proviron powder yakawedzera kuve yakakurumbira pakati pe steroid vachishandisa vapambi uye vatambi kukurudzira hupenyu hwepabonde hutano hwakanaka.
Raw Mesterolone (Proviron) powder (1424-00-6) video
Raw Mesterolone (Proviron) powder (1424-00-6) Tsanangudzo
Raw Mesterolone (Proviron) poda, inotengeswa pasi pezita rokuti Proviron pakati pevamwe, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga inoshandiswa kunyanya mukurapa maitiro epasi e testosterone. Ive yakashandiswawo kubata kubata kwechizvarwa chevanhu, kunyange zvazvo kushandiswa uku kuri kukakavara. Inotorwa nemuromo.
Raw Proviron powder inoshandiswa mukurapa kukanganiswa kwe androgen munhurume uine hypogonadism, anemia, uye kutsigira kubereka kwevakadzi pane zvimwe zviratidzo. Ive yakashandiswawo kubata kubata nguva yekuyaruka muvakomana. Nemhaka yokuti inoshayikwa nesrogenic effects, Raw Mesterolone (Proviron) poda inogona kuratidzirwa mukurapa mhaka dze androgen inoshaya umo unyoro webonde kana gynecomastia iripo zvakare. Chirwere ichi chinorondedzerwa sechinhu chakanyanya kusimba uyerorogen ine basa risina basa uye haigoni kushandiswa kuti chinangwa che androgen chichigadziriswa, asi ichiri kushandiswa zvikuru mukurapa.
Raw Mesterolone (Proviron) powder (1424-00-6) Specifications
Product Name Raw Mesterolone (Proviron) powder
Kemikari Name Proviron, vamwe
muchiso Name Hapana zuva
Kirasi yeMishonga Androgen; Anabolic steroid
Molecular Weight 304.474 g / mol
SMILES O = C4C [[Email akadzivirira]@H] 3CC [[Email akadzivirira]@H] 2 [[Email akadzivirira]] (CC [[Email akadzivirira]] 1 (C) [[Email akadzivirira]@H] (O) CC [[Email akadzivirira]] 12) [[Email akadzivirira]@] 3 (C) [[Email akadzivirira]@H] (C) C4
Monoisotopic Mass 304.24 g / mol
Melting Point 204 ° C
Tsanangudzo yemuviri simba
APane Proviron ndiro yebhizimisi / zita rezita re androgen rinozivikanwa seRaw Mesterolone (Proviron) powder. Iyo inogadzirwa nemuromo, uye haifaniri kuonekwa seanabolic steroid.
Chii Raw Mesterolone (Proviron) powder (1424-00-6)?
Proviron, iro zita remasterolone, isiri yakagadzirwa nemurume weshure. Mesterolone, chemicheni inozivikanwa se1-methyl-5? -Dihydrotestosterone (DHT), inonzi methylated (kuwedzerwa kweboka re methyl -CH3) ichiita kuti ive steroid inoshanda yakafanana zvikuru neyakasikwa DHT iyo isingashanduki kuva estrogen kana progesterone (zvose zvevakadzi mahomoni) kamwechete mumuviri. Proviron powder ine zvakawanda zvinobudirira pamuviri, kusanganisira kuwedzera musimba, kuwedzera maitiro e testosterone uye kubata chirwere chepabonde chisina kunaka.
Iyo Yakakura Mesterolone (Proviron) powder (1424-00-6) mabasa
Chekutanga kushandisa Proviron powder munyika yezvokurapa ndekurapa uyerogenic kukanganisa kunowanzokonzera yekare. Mushonga wacho unoshandiswawo semubatsiro wekubereka uye pre-pubescent yevarume, izvo zvinoita kuti Proviron powder ive steroid inobatsira iyo inopa migumisiro yakanaka mumuviri womunhu. Bodybuilders nevamwe vatambi vashandisewo mano ezvinodhaka kuti avabatsire kuwana mishonga yakaoma nekuvandudza testosterone hormone levels.
Proviron powder is dihydrotestosterone yakabva anabolic steroid, uye inogadziriswa DTH hormone pamwe nekuwedzera kwemashyl ​​boka nekakoni pane imwe nzvimbo. Izvi zvinogonesa hormone kuti ichengetedze kuwedzerwa kwemuromo sezvo ichichengetedzwa kubva pakuparara kwepfungwa.
Raw Mesterolone (Proviron) powder (1424-00-6) Dosage
Munyika yezvechiremba yekurapa kusakwanira uyerogenicity, bhandi rimwechete re25mg rinotorwa katatu pazuva (kwekwose kwe75mg pazuva) rinoshandiswa pakutanga kurapwa, rinoteverwa nekuderedzwa kwemazamu gare gare kumigadziro yekuchengetedza imwe 25mg tablet rimwe zuva. Mukurapa kwekusagadzikana kwevarume, zviyero zvakafanana zvinowanzoshandiswa, kunyange zvimwe zvinowedzera kubereka zvinodhaka zvinosanganiswa pamwe chete neProviron.
Munyaya yevashandi vemapurisa nevatambi, Proviron inowanzoshandiswa pakati pe50 - 150mg zuva nezuva kuti ishandise Estrogen mazinga, kuderedza kusachengetwa kwemvura (kunokonzerwa ne estrogen), kana kuti kuwedzera kubereka shure kwekupedzisira kwemhepo.
Kunyange zvazvo Proviron isingagamuchirwi kuti ishandiswe kuvasikana, vamwe vakadzi munharaunda yemitambo uye yekuvaka muviri vanosarudza kuishandisa. Muchiitiko ichi, imwe Proviron miyo ye 25mg pazuva inokwana kuchinja kutarisa kwemuviri. Izvi zvinofanira kuitika kwete kupfuura 4 - masvondo e5 kuitira kuti usadzivirire maitiro ehupenyu.
Raw Mesterolone (Proviron) powder (1424-00-6) zvinobatsira
Sezvakawanda nevana analiclic steroids, kusagadzikana kwepabonde kunogona kuva nyaya inowanzoitika inoratidzika kuti haifaniri kuenda kana isina kusiyiwa isina kutarisirwa. Iyo inokurumidza uye yakawanda inokonzera mahomoni muviri wako unowanikwa apo paine steroid inogona kukusiya iwe uchirembera kana zvichikosha zvikuru muimba yekurara.
Iva Yakakura Fertile
Pamwe chete nehuwandu hwe testosterone, kubereka kwevanhu kunovandudzwa zvikuru pamwe neProviron. Asi kuti zvive zvakajeka, Proviron powder haina kuwedzera mbeu yehutu. Sezvo mbeu nemarume zvinhu zviviri zvakasiyana, zvinogona kuva nyore kuvhiringidza ivo. Nzvimbo ndiyo chaiyo inobereka mazai evanhukadzi. Kune rumwe rutivi, chirume ndiyo motokari inobvumira mbeu kuti inhambire kune imwe nzvimbo yekupedzisira.
Muchiedza chakanaka, Proviron powder inogona kubatsira kubvumira murume kuti apedzisire aende uye kutanga mhuri iye neshamwari yake zvido. Mazuva ekurindira kuti anzwe kana kana kwete kutora pamuviri kuve kwakanaka kana kuti haufaniri kumirira zvakare. Kubereka mbeu inobereka inogona kunge yakaoma sekuwedzera kuwandisa chirongwa chakakwana cheProviron kune steroid yako.
Sezvakaita vana vanabolic steroids, Proviron powder uyewo inopa kukudzwa kunoshamisa mu testosterone.
Kuchenesa Male Breasts
Sezvo nevakawanda uyerogenic steroids zvikuru, kunyatsokurudzika kunogona kuva kunetseka zvikuru kwevarimi vemiti. Ndinofara neProviron powder, mazamu echikadzi anova pasina-kuratidza. Chero chete chakaoma, mutsara wakaoma wepecs unogona kuonekwa panzvimbo yehuwandu hwomukati uye mafuta emazamu evarume.
Tenga Mesterolone (Proviron) powder kubva kuBuasas.com
Zvose zvaunofanira kuziva nezveProviron yekuvaka muviri
De Souza, GL, & Hallak, J. (2011). Anabolic steroids uye kusununguka kwevarume: kuongorora kukuru. BJU international, 108(11), 1860-1865.
El Osta, R., Almont, T., Akashinga, C., Hubert, N., Eschwège, P., Hubert, J. (2016). Anabolic steroids kushungurudzwa uye kusununguka kwevarume. Kutsika uye kuchipatara uyerology, 26(1), 2.
Angell, PJ, Green, DJ, Ishe, R., Gaze, D., Whyte, G., & George, KP (2018). Yakagadzikana nemwoyo mishonga kupikisa muvana vanalic steroids vashandisi: A preliminary investigation. Science & Sports, 33(6), 339-346.
Raw Testosterone powder (58-22-0)